Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil oo duqeyn Cirka ah ka geysatay marinka Qaza | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil oo duqeyn Cirka ah ka geysatay marinka Qaza
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa duqeyn xagga cirka ah ku qaaday saddex goobood oo kala duwan oo ku yaalla marinka Qaza, sida laga soo xigtay ilo wareedyo maxalli ah horaantii saaka oo Isniin ah.
Weeraradaasi ayaa lala beegsaday deegaanada Rafah, Khan Yunis iyo Beit Lahia oo ku yaal koonfurta Gaza,mana jiraan wax khasaare ah oo weli la soo sheegay.
Ciidamada difaaca Israa’iil ayaa goor dambe sheegay in ay duqeeyeen 4 xarumood oo Xamaas u adeegsan jirtay tababarka ciidanka iyo barashada hubka.
Israa’iil ayaa ku dooday in saddex gantaal laga soo tuuray Gaza 48 -dii saac ee la soo dhaafay,isla markaana ay burburiyeen nidaamkooda difaaca cirka ee Iron Dome.
Previous articleSoomaali weerar ka geystay dalka Talyaaniga
Next articleCiidamo kaxtirsanaa gorgor oo maantay laga soo raray Dhuusamareeb